Ciidamada NATO oo Maraakiib dagaal ku raadinaya Muqalasiin Lacag badan ka dhargay (Daawo Sawirada) | Gaaloos.com
Home » galmada » Ciidamada NATO oo Maraakiib dagaal ku raadinaya Muqalasiin Lacag badan ka dhargay (Daawo Sawirada)
Ciidamada NATO oo Maraakiib dagaal ku raadinaya Muqalasiin Lacag badan ka dhargay (Daawo Sawirada)
Ciidamada Maariniiska gaashaanbuurta NATO oo ka amar qaadanaya Midawga Yurub ayaa markii ugu horeeysay waxaa loo fasaxay inay nolasha ku soo qab qabtaan Maqalasiin la sheegay inay Taajiriin noqdeen oo ay lacag ka dhargeen .
Maraakiibta dagaalka ee ciidamada Gaashaanbruurta NATO ayaa shalay iyo maanta waxa ay si toos ah u soo gaareen xeebaha u dhaxeeya dalalka Turkiga iyo Giriiga waxaana lagu wadaa inay soo qab qabtaan Muqalasiin ka ganacsada dadka Qaxootiga ah kuwaas oo sameeystay doomo ay dadka ku tahriibiyaan .
Masuulka ugu sareeya Gaashaanbruurta NATO , Mr.Jens Stoltenberg oo u dhashay dalka Norway lana hadlay warbaahinta ayaa waxa uu shaaciyay in ay go´aan buuxa ku gaareen sidii looga hor tagi lahaa Muqalasiinta ka qaraabata xeebaha u dhaxeeya wadamada Turkiga iyo Giriiga kuwaas oo dalalka Midawga Yurub u soo tahriibiya Qaxootiga .
Ciidamadaan cusub ee loo diray xeebaha u dhaxeeya wadamada Turkiga iyo Giriiga ayaa waxaa hogaaminaya dalalka Jarmalka iyo Ingiriiska . Qaxootiga ugu badan ee ka soo haajira dalalka Dagaaladu ka holcayaan ayaa inta badan waxeey soo maraan ama ka soo tahriibaan Jasiirado yar yar oo ku yaala xuduudaha u dhaxeeya dalalka Turkiga iyo Giriiga waxeeyna gacan ka helaan Muqalasiin lacago badan ka aruursada .
Title: Ciidamada NATO oo Maraakiib dagaal ku raadinaya Muqalasiin Lacag badan ka dhargay (Daawo Sawirada)